Markab U Raran Ganacsato Reer Muqdisho Ah Oo Maalintii Shanaad Ku Xayiran Xeebaha PUNTLAND | Somaliland Today
← Hambalyo Dhalasho: Muniir Iyo Xamda Oo Gabadhi U Dhalatay
DAAWO: Somaliland Oo Walaac Ka Muujisay Cudurka EBOLA →
Markab U Raran Ganacsato Reer Muqdisho Ah Oo Maalintii Shanaad Ku Xayiran Xeebaha PUNTLAND
(SLT-Eyl) – Wararka ka imaanaya deegaanka Kabaal oo ku dhow degmada Eyl ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya, ayaa ku soo waramaya in Markab u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed u ku soo caariyay halkaas, sababo la xidhiidha cilado dhinaca matoorka ah oo soo gaadhey awgeed.
Markabkan oo ka soo shiraaqdey Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka, ayaa waxa uu dhowr Maalmood dhex taagnaa badda ku dhow Eyl, laakiin dabeylaha ayaa u soo kaxeeyay halka uu hadda ku soo caaryey “Markabkan waxa u ku sii jeeday magaalada Muqdisho, waxaana uu ka yimid magaalada Dubia ee Imaaraadka Carabta,“ ayuu yidhi Axmed Cali oo kamid ah dadka deegaankaas oo la hadlay warbaahinta gudaha.
Ninkan oo la waydiiyey waxa uu u maleynayo in Markabka ay ku dhaceen ayaa ku jawaabay “Walaal waxaa naloo sheegay in cilad darteed uu halkan ugu soo caariyay, waxaana uu muddo afar cisho ah ku xayiran-yahay Kabaal” ayuu mar kale sheegay Axmed.
Dadka deegaanka ayaa la sheegay in cunto iyo biyo gurmad ah ay gaadhsiiyeen shaqaalaha saaran Markabkan oo laga leeyahay dalka Suuriya, waxaana bad-maaxinta saaran ay isugu jiraan Afrikaan iyo carab.
Ciidamo ka socda kuwa ilaalada xeebaha Puntland ayaa sidoo kale la sheegay in ay gaadheen deegaanka Kabaal si ay u ogaadaan xaaladda shaqaalahan oo dhowr maalin badda dul-sabaynayay.
Ugu danbayntii degmada Eyl ayaa caan ku ahayd in inta badan la keeno maraakibta laga soo qafaasho xeebaha ka baxsan Somaaliya, inkastoo labadii sano ee la soo dhaafay ay is dhimeen weerarradii lagu qaadi jiray maraakiibta shisheeye.